टेस्ला बन्द कारखानाको बिरूद्ध कारखाना खुल्छ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
टेस्ला बन्द कारखानाको बिरूद्ध कारखाना पुनः खोल्छ
14 सक्छ, 2020 14 सक्छ, 2020 शमूएल गुश क्यालिफोर्निया, डोनाल्ड ट्रम्प, समाचार लेख, राजनीति
यो अझै अस्पष्ट छ कि टेस्लाले कानुन बिरूद्ध पुनः सञ्चालनका लागि कुनै दण्डको सामना गर्ने छ कि छैन।
ट्रम्प र मुनचिनले कस्तूरीलाई समर्थन गर्छन्।
चुनावको अगाडि ट्रम्प र उनका सल्लाहकारहरू अर्थव्यवस्था फेरि सुरु गर्न र समस्यालाई शान्त पार्न कात्तिकमा छन्।
टेस्लाले क्यालिफोर्नियाका स्थानीय अधिकारी फ्रेम्सन्टको शटडाउन आदेशलाई वेवास्ता गरेको छ र काउन्टीमा यसको सुविधा पुनः खोलेको छ। अलामेडा काउन्टीका एक प्रवक्ताले मंगलबार भनेका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले टेस्लाको पुनः सुरक्षाकर्मी मार्गनिर्देशनहरूको समीक्षा गरिरहेछन्। टेस्लाको कारखाना अलामेडा काउन्टीमा अवस्थित छ।
यो सान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्र को छवटा क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जुन हाल आश्रय-अन्तर्गतको अर्डर अन्तर्गत रहेको छ जुन महिनाको अन्त्यमा म्याद सकिन्छ। काउन्टीले अनावश्यक व्यवसायहरू पुन: खोल्न ढिलाइ गर्यो। काउन्टी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले भनेका छन् कि उनीहरूको उपनियमले राज्यलाई ट्रम्प गर्यो।
उनीहरूले टेस्लाको पुन: खोल्ने पुष्टि गरेका छन् तर यसमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे। यो अझै अस्पष्ट छ कि टेस्लाले कानूनको बिरूद्ध फेरि कामका लागि कुनै दण्डको सामना गर्ने छ कि छैन। अलामेडा काउन्टी शेरिफको कार्यालय र फ्रेम्सन्ट पुलिस विभागले पछिल्लो विकासको सम्बन्धमा बयान जारी गरेको छैन।
ट्रम्पले कस्तूरीलाई समर्थन गर्दछ
मंगलबार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटर मार्फत टेस्लाको पुन: खोल्नका लागि समर्थन व्यक्त गरे, भन्दै, "क्यालिफोर्नियाले टेस्ला र एलोन मस्कलाई अब प्लान्ट खोल्न दिनुहोस्। यो छिटो र सुरक्षित रूपमा गर्न सकिन्छ! " कस्तुरीले केही समयको लागि क्षेत्रीय अर्डरको डिक्री गर्यो अनावश्यक व्यवसायलाई व्यापार पुनः सुरु गर्नबाट रोक्दै।
शनिबार उनले आफ्नो कम्पनीको कारखानालाई क्यालिफोर्निया बाहिर सार्ने धम्की दिए। उनले शटडाउन आदेशको लागि अलेमेडा काउन्टीमा पनि मुद्दा हाले। सूटले आफ्नो टेस्ला कारखाना फेरि खोल्न निषेधाज्ञा खोज्यो।
अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन मुनचिन सोमबार भने क्यालिफोर्नियाले कोविड -१ crisis को सid्कटको बीचमा टेस्लाको पुन: स्थापनालाई समर्थन गर्नुपर्दछ। “म एलोन कस्तूरीसँग सहमत छु। उनी क्यालिफोर्नियाका सब भन्दा ठूला रोजगारदाता र उत्पादक हुन्। क्यालिफोर्नियाले स्वास्थ्य समस्याहरूको समाधान गर्न आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्नुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ताकि ऊ छिटो र सुरक्षित रूपमा खोल्न सक्छ, ”मुनचिनले सीएनबीसीलाई भने।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले अप्रिल महिनाको अवधिमा २०..20.5 मिलियन रोजगारी गुमाएको छ। १ 1939। In मा राष्ट्रले बेरोजगारी तथ्या .्कहरू ट्र्याक गर्न शुरू गरेदेखि यो रोजगारको क्षतिमा सबैभन्दा खराब महिना हो। बेरोजगारी दर १ 14.7..XNUMX प्रतिशतमा बढेको छ। ह्वाइट हाउसले कामको घाटालाई विपत्तिजनक रूपमा खराब मान्दछ। चुनावको अगाडि ट्रम्प र उनका सल्लाहकारहरू अर्थव्यवस्था फेरि सुरु गर्न र समस्या न्यूनीकरण गर्नका लागि कम्मर कसेर लागेका छन्।
यस समयमा राजनीतिक प्रभावहरु बेवास्ता गर्न गाह्रो छ। स्टीफन मूर, एक व्हाइट हाउस आर्थिक सल्लाहकार, प्रकट भएको छ कि उनी र सहयोगी अर्थशास्त्री आर्ट लाफरले हालै व्हाइट हाउसमा एक अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन् जसले यदि व्यवसायहरू बन्द मोडमा रहिरहे भने आर्थिक क्षतिको गम्भीरतालाई प्रकाश पार्दछ।
उनले भने, "हामीले चेताउनी दिइरहेका थियौं कि हामीले यथाशीघ्र राज्य निर्माण गर्न सुरु गरेनौं भने बाँकी वर्षको लागि वास्तवमै खराब अर्थव्यवस्था हुनेछ।" अर्थशास्त्रीले चेतावनी दिए कि आउने महिनाहरूमा अर्थव्यवस्था धेरै नै कष्ट पाउने छ। उनले यो पनि जोड दिए कि ट्रम्पको पुनः चुनाव आर्थिक सुधारमा भारी निर्भर हुनेछ।
“मलाई लाग्छ कि उसको पतनबाट केही छ - चीजहरू अझ राम्रो हुँदैछन् भन्ने कुरा देखाउदै। यदि हामी गम्भीर मन्दीमा छौं र मानिसहरूलाई लाग्छ कि हामी केवल एल आकारको मन्दीमा फसेका छौं, भने ऊ वास्तविक समस्यामा छ। ”
सांप्रदायिक समाचार कोरोनाभाइरस कोभिड 19 डोनाल्ड ट्रम्प Elon Musk tesla
रसियामा ड्रोन फूड डेलिभरी सुरू भयो - के यो अमेरिकामा आउँदैछ?
माइकल जोर्डनको साथ तह कुर्सीहरू